भारतले महाकालीको बालुवा लुट्यो, कहाँ छौ राष्ट्रवादी सरकार ? « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
भारतले महाकालीको बालुवा लुट्यो, कहाँ छौ राष्ट्रवादी सरकार ?
बैतडी । भारतले महाकाली नदीमा ठूला एस्काभेटर चलाएर बालुवा उत्खनन् गरिरहेको छ । बालुवा उत्खननका लागि भारतीय जिल्ला प्रशासनले अनुमति दिएको हो । नेपाल-भारतको सिमानामा बग्ने महाकाली नदीको भारततर्फको झुलाघाट, कानडी र गिठीगडा क्षेत्रमा डोजर र एस्काभेटरको प्रयोग गरेर क्षमताभन्दा बढी बालुवा उत्खनन भइरहेको हो ।
सडक निर्माण लगायतको कामका लागि भारतीय जिल्ला प्रशासनले अनुमति दिए पनि क्षमताभन्दा बढी बालुवा उत्खनन् भइरहेको भारतीय सञ्चारकर्मी सुरेन्द्र आर्यले बताए । ठेकेदारले दैनिक सयौँ ट्रक बालुवा निकालेर लैजाँदा भारततर्फका नदीतटीय क्षेत्रका बासिन्दासमेत दुर्घटनाको जोखिममा परेको आर्यले बताए ।
नेपालतर्फ मेसिनको प्रयोग नगरी मानवीय श्रमको प्रयोग गरेर बालुवा उत्खनन गर्दा पनि प्रशासनले कडाइ गरेको छ तर भारततर्फ ठूलाठूला मेसिनले बालुवा उत्खनन भइरहेको स्थानीय जयसिंह भाटले बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।